निकोलस Rodni Dreyk - 1970 को शुरुवात एक लोकप्रिय ब्रिटिश गायक। उहाँले गीतहरू र mysticism मा enveloped दुःखी टिप्पणीहरू को समग्र प्रदर्शन गर्न दिन्छ श्रवणगितार लागि आफ्नै रचनाहरूको को कार्यान्वयन लागि प्रसिद्ध भए। सुन्दर र underrated अभिनेता nik Dreyk जसको जीवनी दुःखी छ, आफ्नो प्रतिभा को प्रशंसक को स्मृति सधैंभरि रहनेछ।
निक Drake पैसा एक परिवार मा, 19 जुन, 1948 मा जन्म भएको थियो, र बाल्यकाल देखि कि भाग्य प्रस्ताव सक्छ सबै भन्दा राम्रो कुरा थियो। आफ्नो परिवारको प्रारम्भिक 1930 मा बर्मा सारियो। निक पिता एक ठूलो व्यापार निगम मा एक इन्जिनियर, जो ती दिनमा, सबै भन्दा प्रभावशाली व्यापार संगठन को एक थियो। निक आमा - मरियम लोयड, को प्रबन्धकहरू एक छोरी थिए। तुरुन्तै आफ्नो आमाबाबुले बैठक पछि विवाह योजना थियो। तर, गर्न परिवार मान अनुसार मरियम परिवारको परम्परा, यो घटना स्थानमा मात्र एक वर्ष वैवाहिक प्रस्ताव पछि लाग्यो। त्यो 21 थाल्दा, जवान मानिसहरू खुसीको कुरा विवाह गरे।
बर्मा मा आफ्नो रहन जारी, तिनीहरूले किनभने ती वर्ष मा देश को पेशा, जापानी सेना को सकिनँ। तीन वर्ष भारत बसाइँ सर्ने रूपमा जवान परिवार, कुनै विकल्प थिएन। दुई वर्ष पछि तिनीहरूले पहिलो जन्म जन्म भएको थियो, देश मा बिताए। यो गब्रिएल Dreyk नाम थियो लामो-प्रतीक्षा केटी थियो। यसरी Nika Dreyka को जेठो बहिनी जन्म भएको थियो।
पहिले नै 1950 Drakes परिवार बम्बे सारियो। दुई वर्ष पछि - बेलायतमा। जहाँ तिनीहरूले सुदूर Leys Tanuort Ying-एडेन को गाउँमा एक लक्जरी दुई-मंजिल्ला घर छान्नुभएको छ। पछि धेरै वर्ष पहिले र को जीवन मा अन्तिम शरण दुवै हुनेछ घर छ ब्रिटिश गायक।
यो निक आमाबाबुको संगीतको लागि एक विशेष प्रेम उल्लेख गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले रचनाहरूको लेखन थिए। मरियम र रडने संगीत र यो संग जोडिएको सबै प्रेम गर्नुभयो। यो बच्चा निक प्रतिभाशाली बच्चा हुर्किसकेका छ कि आश्चर्य छैन त्यसैले छ। Nik Dreyk आमा को प्रयासमा धन्यवाद यस्तो प्रारम्भिक उमेर देखि पियानो रूपमा सांगीतिक साधन स्वामित्व।
स्कूल वर्ष गायक
बर्कशायर मा ईगल आवास घर निक 1957 मा यसको ढोका खोलियो लागि। यो संस्थाले मा, त्यो पाँच वर्ष, सफलतापूर्वक कलेज प्रवेश पछि सिके। निक खेल ठूलो आशा lodged। यो अझै पनि कुनै विद्यार्थी Marlborough हटाउन सक्षम छ जो महिला 100 गज मा आफ्नो रेकर्ड, द्वारा प्रमाणित छ। एक बिन्दुमा उहाँले पनि उहाँले नियुक्त टोलीमा को कप्तान थियो जहाँ रग्बी, एक खेल मा भाग लिए। समानान्तर मा, nik Dreyk उहाँले Clarinet र सेक्सोफोन प्ले जहाँ कलेज अर्केस्ट्रा, मा भाग।
1965 मा लगभग, निक आफ्नो comrades मिलेर आफ्नो पहिलो विद्यालय ब्यान्ड गठन। यसलाई उहाँले पियानो खेले, तर कहिले काँही उहाँले गाउन र सेक्सोफोन प्ले सकेन। "सुगन्धित माली" लोकप्रिय गीतहरू र आफ्नो समय मा प्रसिद्ध भन्दा ज्याज स्तर को आवरण संस्करण प्रदर्शन।
अध्ययन संगीतकार स्थितिहरू लिन थाले। आफ्नो शैक्षिक ज्ञान कम थियो त त्यो, संगीत, कला, र आफ्नै समूह गीतहरू जोडतोडले थियो। उहाँले रसायन र भौतिक मा बुरी तरिका नियमित परीक्षा असफल भयो, तर त्यसपछि पनि ब्रिटिश गायक प्रदर्शन गीतहरू रोकियो छैन। 1965 मा, निक आफ्नै श्रवणगितार, भविष्यमा मुख्य सांगीतिक सहयोगी र सहायक हुनेछ पायो छ। यो संग, त्यो यात्रा र केही प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकारहरूको संगीत उपस्थित छ।
म कलेज गर्न "Fitsvilyam" क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा, विभाग मा अंग्रेजी साहित्य को अध्ययन लागि गए सफलतापूर्वक कलेज निक Drake मा परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरे पछि। यी सबै घटनाहरू 1966 मा unfolded। तर, यो प्रतिष्ठित संस्थाले ब्रिटिश गायक मा अध्ययन मा embarking हतार थिएन। फ्रान्स रहन एक sabbatical लिए किन हो। त्यहाँ उनले अक्टोबर 1966 मा अगस्ट देखि साथीहरूसँग बस्थे।
अक्टोबर मा इङ्गल्याण्ड फर्केपछि पछि, उहाँले गाँजा jamb धूम्रपान गर्ने प्रयास पहिलो पटक, यो लण्डन भयो। फेरि एक पटक उहाँले अझ गम्भीर narcotic लागूऔषधको खोज फ्रान्स फर्के, तर अन्ततः संसारमा सबै भन्दा राम्रो घाँस लागि मोरक्को गए।
गायक को फिर्ती
निक Drake घर फर्के, त्यो उनको बहिनी संग बस्न थाले। उनको घर लन्डन को एक छेउछाउको स्थित थियो - Hampstead। अक्टोबर मा, त्यो क्याम्ब्रिज मा आफ्नो पढाई सुरु भयो। शिक्षा कर्मचारी तुरुन्तै भने निक Drake - सिक्ने मा सानो चासो देखाइएको छ जो, तर एक उत्कृष्ट आधारभूत प्रशिक्षण छ एक उज्ज्वल र charismatic अक्षर। हामी खेल ब्रिटिश गायक गरेको आवेग सुरक्षित भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले कसरी ठ्याक्कै यो पाठ क्याम्ब्रिज मा विशेष ध्यान दिइएको छ गर्दैन। तर एक समय पछि, गाँजा धूम्रपान र गिटार प्ले द्वारा पनि आत्म-कार्यरत शारीरिक शिक्षा प्रतिस्थापित थिए। यो सबै निक क्याम्ब्रिज छात्रावास कोठा मा साथीहरूसँग गरिरहेको छ। त्यसैले, हरेक हप्ता उहाँलाई विद्यार्थी र शिक्षकहरू एक साधारण भाषा फेला पार्न सबै गाह्रो प्रशिक्षण।
एक क्यारियर मा पहिलो कदम
सार्वजनिक प्रदर्शन Nika Dreyka इस्पात कफी पसल, पबहरूमा र लन्डन को सानो क्याफे लागि प्रारम्भिक क्षेत्रमा। Dzho Boydom - सुखी संयोग द्वारा र श्रमसाध्य रचनात्मक प्रक्रिया नै समय धन्यवाद मा, निक समय को सबै भन्दा प्रसिद्ध उत्पादकहरु को एक भेट्न सम्मान थियो। यो मानिस संसारको सबै भन्दा लोकप्रिय रक, पंक, folk-, देश ब्यान्ड र गायक खुलेको छ।
आफूलाई काम गरेकी गीतकार, - निक। 1968 मा, प्रस्ताव Boyd पछि, सँगै तिनीहरूले4गीतहरू रेकर्ड भयो। पछि, सबै हिट Drake सुनेर पछि, जो उसलाई पाँच पात आफ्नो debut एल्बम बायाँ थप जारी गर्न एक सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राखे। जो को memoirs अनुसार, निक, धेरै आश्चर्य, उहाँलाई अगाडि प्रशंसा वा श्रद्धा देखाए तर, बस र शान्तपूर्वक जवाफ "ठीक छ, त्यसो गर्न कुरा छैन।!"
तर निक पीओएल Viler को नजिकको साथी उहाँले Starry Olympus पहिलो सफलताको खुसी थियो र एक लोकप्रिय ब्रिटिश गायक क्यारियर को संभावनाहरु द्वारा धेरै प्रोत्साहन थियो Drake प्रेरित थियो कसरी सम्झनुहुन्छ। यो घटना पछि, उहाँले पनि क्याम्ब्रिज मा आफ्नो पढाई नत्याग्ने निर्णय, र तेस्रो वर्ष त्यहाँ अन्त छैन।
debut एल्बम को इतिहास
सुरुमा, एल्बम ब्रिटिश गायक एक पूर्ण बिभिन्न टोली मा खेलेका आफ्नो रेकर्ड संगीतकार मा कल गर्न imprudence थियो किनभने, एकदम गाह्रो दिइएको थियो। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको वातावरण मा unquestioned अधिकार थियो। तर पनि यी क्षणमा छैन जहाँ एक लामो समय को लागि एक गीतकार र निर्माता एक साधारण भाषा फेला पार्न सकेन विकार, को मुख्य कारण थिए। मूल कारण एल्बम नै समय अन्य थप लोकप्रिय र सफल कलाकार को रेकर्डिङ एल्बम बीच बिश्रामको समयमा रेकर्ड थियो भन्ने तथ्यलाई थियो। रेकर्ड व्यवस्था गर्न अतिथि संगीतकार बीच धेरै permutations पनि काम को प्रगति मा एक सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अन्त मा, धेरै प्रयास र उथलपुथल पछि debut एल्बम 1969 मा, 1 सेप्टेम्बर मा जारी भएको थियो।
एल्बम को विफलता
एल्बम को भाग्य मा नकारात्मक भूमिका खेलेका:
संगीतकार धेरै परिवर्तनहरू।
केही महिना लागि एल्बम को रिलीज ढिलाइ।
यी सबै कारक को debut एल्बम Nika Dreyka मा समीक्षा र समाचारको गुणस्तर सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। बनाउने रेकर्ड चाहेको गर्न धेरै बाँकी छ।
रिलिज पछि, प्रकाश नै निक उहाँले लामो प्रतीक्षा बहिनी आफ्नो काम को परिणाम साझेदारी गर्न इच्छा छैन भनेर निराश थियो। उहाँ सधैं आफ्नो योजना भावना र भावना विषय छैन बारे एकदम secretive मान्छे संयम देखाए भएको छ। गब्रिएल निक, उनको कोठा गए भन्ने शब्द संग ओछ्यानमा आफ्नो debut एल्बम फाले भन्छन्: "! यहाँ त्यो हो" - अनि तुरुन्तै सेवानिवृत्त।
एल्बमको शीर्षक विशेष ध्यान दिइएको छ। यो निहितार्थ थियो देखिन्थ्यो। सबैलाई "पानाहरू मात्र पाँच" यो पुछ्ने कागज को एक नयाँ टुक्रा किन्न समय छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गर्न भनेर लाग्यो। र यो गाँजा मा कताई थिए भने कुनै गोप्य छ। निक आफूलाई नाम खुसी थियो, तर कुनै पनि विशेष अर्थ ल्याउन छैन। मात्र पाँच वर्ष पछि, वाक्यांश पाँच पात धेरै फरक, गाढा छाया प्राप्त हुनेछ बायाँ। यो ज्ञात हुँदा कि सबै भन्दा ब्रिटिश गायक बस पाँच वर्ष बस्न छाडियो।
सेप्टेम्बर 1969 मा, निक को "शाही महोत्सव हल" मा लोकप्रिय समूह को एक लागि खोल्ने कार्य गरे। उहाँले तुरुन्तै सायद यो Drake को सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन थियो, आफ्नो मूल प्रदर्शन संग दर्शक charmed।
प्रशिक्षण सन्दर्भमा संग, Drake यो दिशा मा बाटो जारी धेरै इच्छा छैन। 1969 को शरद ऋतु मा उहाँले क्याम्ब्रिज बायाँ र लण्डन कलेज गए। निक अनुसार, अध्ययन कला र रचनात्मक कार्यान्वयन उहाँलाई विचलित। त्यसैले तिनले निर्णय गरे। मेरो बुबा परिस्थिति र यस्तो लापरवाह छोरा को निर्णय अत्यन्तै असन्तुष्ट थियो। सबै अवसरका लागि एक अतिरिक्त बीमा छ - उहाँले उच्च शिक्षा को उपाधि कि विश्वास गरे। आफ्नो बुबाको विश्वास गर्न succumbing बिना निक यस्तो बीमा गर्न आवश्यक छैन भनेर उहाँले एकदम बिना गर्न सक्षम छ लाग्यो।
लण्डन पहिलो महिना, निक निरन्तर त्यसपछि साथीहरू, त्यसपछि बहिनीका अपार्टमेन्ट सुतिरहेको, एक ठाउँमा रहन थिएन।
1970 द्वारा, nik Dreyk अचम्मको नियमित देखा पर्न थाले। राम्रो - उहाँले एक पटक प्रदर्शन एक हप्ता कि विश्वास गरे। निक उहाँले पाऱ्यो थिएन कि, धेरै लोकप्रिय बैंड को प्रदर्शन अघि प्ले खुलेको छ।
जुलाई 1970 एक्लै मा , सर Elton Dzhon4हिट Drake को कभर संस्करण रेकर्ड भयो। यसलाई असामान्य र आश्चर्यजनक थियो। तिनीहरूले यूहन्ना 2001 मा जारी एल्बम, को Prologue भनिन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो एल्बम, शीर्षक, Bryter layter, मध्य-जुलाई 1970 मा रेकर्ड भएको थियो। आफ्नो रेकर्डिङको लागि निक फेरि प्रसिद्ध संगीतकार सोधे, त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई साथ। पारित कठिन काम बन्द भुक्तानी गरेको छ कि। यो केवल nik Dreyk द्वारा आयोजित छ जो परियोजना, को व्यावसायिक गैर-बोध को तथ्यलाई राज्य परिणाम नकारात्मक रेकर्ड थियो भन्न मुश्किल छ। एल्बम पर्याप्त वित्तीय मांग छैन।
अर्को असफलता पछि जीवन
लण्डन आफ्नो विफलता साकार पछि, निक लगभग despaired। उहाँले कार्य गर्न इच्छा र शक्ति छैन, त्यो सार्वजनिक लज्जित। Drake लस एन्जलसका Boyd छोडेर पछि परिसर देखियो। निक आफ्नो जीवन मा एक गहन आंकडा गुमाए। Boyd उहाँलाई लागि सल्लाहकार थियो, Drake उदास थियो। लण्डन कामबाट आफ्नो सारा मनोवृत्ति otptimistichesky उहाँले दुखी र उदास थियो, एक fiasco थियो।
धेरै सेलिब्रेटीहरू समय धेरै उदास र धेरै लजालु मा Drake सम्झन। उदाहरणका लागि, यो निक आफ्नै गीतहरू कार्यान्वयन बीचमा उठे र कोठा बाँकी जब मामला थियो। जाहिर छ, आफ्नो मन मा त्यहाँ डरलाग्दो कुरा, उहाँले त unceremoniously सार्वजनिक र आफ्नो प्रतिष्ठा संग प्रविष्ट यदि छ।
1971 मा पहिले नै, निक को परिवार याद Drake को मानसिक अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन परीक्षा पछि उहाँले antidepressant को एक प्रभावशाली खुराक निर्धारित थियो जहाँ क्लिनिक, गर्न लागे। गायक आफ्नो प्रतिष्ठा बारेमा चिन्तित थियो र क्लिनिक यसको स्थान को वास्तवमा को एक सामान्य अवलोकन गर्न राख्नु हुन। पनि उहाँका घनिष्ठ मित्रहरू यसको बारेमा सबै थाहा थिएन। निक दुखाइ को मानसिक अवस्था मुद्दाहरू कुनै पनि प्रतिक्रिया। यी सबै परिवर्तनहरू कठिनाई उहाँलाई दिइएको थियो। उहाँले भनेर चक्की लिइरहेको बारेमा लजालु उदास थियो।
गायक जीवन अन्तिम एल्बम
पछि यस्तो कठिन 1970 निक बाहिर संसारबाट बन्द तारले थियो। उहाँले मात्र गाँजा को एक खुराक को लागि सडक मा बाहिर गए वा केही अनियमित कन्सर्ट मा प्ले गर्नुहोस्। गाँजा लागि जाँदा, त्यसपछि, आफ्नो मित्र अनुसार, निक यसलाई अव्यावहारिक मात्रा मा खोजे। पनि बहिनी Drake हरर समय को शब्दहरू याद: "उहाँले आफ्नो जीवन जब म यसलाई आफैलाई देखे भन्ने एक भयानक ट्रयाक मा गरिएका बताए।"।
अझै nik Dreyk भविष्यमा आफ्नो क्यारियर र जीवनको अन्तिम हुनेछ जो प्लेट, रेकर्ड गर्न जन काठ सम्पर्क गर्न साहस थियो। सारा प्रक्रिया एक Monotone थियो। उहाँले एक गिटार संग स्टूडियो आए। म4घण्टा को कुल को लागि, बस दुई रात रेकर्ड मा बिताए। प्राण मा कुराकानी समयमा Drake र काठ आफ्नो जीवनको धेरै घटनाहरू द्वारा साझेदारी। निक उहाँले यी गाढा विचार यूहन्ना साझेदारी, गहिरो अवसाद बताउनुभयो। उहाँले पनि आफ्नो प्राण को यस्तो उदास राज्य को शुरुवात, के थियो स्पष्ट जवाफ सक्षम थियो। एल्बम सख्त र चिसो, नाम थियो गुलाबी चन्द्र बाहिर गरियो।
फेब्रुअरी 1972 मा, एल्बम जारी थियो। उहाँले पनि आलोचकहरु केही चापलूसी समीक्षा भएको थियो। गुलाबी चन्द्र अघिल्लो दुई एल्बम भन्दा कम व्यावसायिक marketability थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, उहाँले सबै भन्दा राम्रो रूपमा कलात्मक सर्कलमा सम्झना छ। त्यहाँ नयाँ प्रबन्धमा एल्बम लेखन गर्न प्रस्ताव थिए, निक बस यसलाई आवश्यक त्यसो गर्न थिएन। शाब्दिक टाउको कपाल tearing उत्पादित उहाँले किन यति हठी र indifferent छ?
निक पूर्ण आफैलाई मा निराश, उहाँले लाग्यो, कि अब गीत र संगीत लेख्न सक्षम छ। त्यसैले म एक क्यारियर प्रोग्रामर सोच्न थाले। पनि उहाँले सेना मा जाने dared।
निक सिर्जना गर्ने प्रयासहरू
1972 मा, निक आफ्नो घर फर्के। उहाँले यो पछाडि एक कदम थियो थाह थियो। मई मा, त्यो एक स्नायु टूटने भोगे। उहाँले Warwickshire मा एक अस्पताल उपचारका लागि पठाइएको थियो।
2 वर्ष पछि निक यूहन्ना काठ भनिन्छ। उहाँले आफ्नो चौथो एल्बम रेकर्ड गर्न निर्णय बताए। तर अन्त मा यो केवल4गीतहरू बाहिर गरियो। Dzhon Vud खेल र गायक को प्रदर्शन जोडले बिग्रन बताए।
तर पनि यस्तो समीक्षा संग, निक फिर्ता हुन खुसी थियो। आफ्नो आमा पछि कसरी खुसी र उनको छोरा बारेमा उत्साहित सम्झे। अर्को गीत Drake जुलाई मा लेखे। यसलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम गीत थियो।
अक्टोबर 1974 मा, nik Dreyk उहाँले एक परित्यक्त खेत मा धेरै महिनाको लागि बस्ने फ्रान्स, गए।
नोभेम्बर 25, 1974 nik Dreyk एक antidepressant एक अधिमात्रा बाट मृत्यु भयो। यो सबै ब्रिटिश गायक को घर मा भयो।
को pathologists अनुसार, मृत्यु मा6AM भयो। कुनै मरिरहेका टिप्पणीहरू र अरू केहि आत्महत्या को अर्थमा समावेश हुन सक्छ थियो। तर डाक्टर यो जानिजानि दबाइ अधिमात्रा छ कि निष्कर्षमा आएको छ।
एक फेला निक गरेको यस्तो परिवार अत्यन्तै छक्क र स्तब्ध भएको थियो। एक स्वरमा सबै उहाँले आत्महत्या प्रतिबद्ध सकेन भनेर ठोकुवा।
डिसेम्बर 2, 1974 उहाँले दफन सेवा पढ्नुहोस् र चर्च नजिकै चिहान मा एक रूखमुनि तिनीहरूलाई गाडे। को अन्त्येष्टि मा लगभग 50 मान्छे उपस्थित।
को फिलिमहरु गर्न साउन्ड ट्रयाक मा गीतहरू
गीत काला आँखा कुकुर, उत्तरी आकाश 1998 मा बाहिर आए, र पछि फिल्म "अंतर्ज्ञान" को लागि ध्वनि रूपमा प्रयोग भएको थियो। यो घटना 2001 मा भयो।
फिल्म "को Pied Piper", 1999 मा भाडामा मा जारी, गीत सेलो गीत विशेष।
एल्बम गुलाबी चन्द्रमा गीतहरू 2006 मा premiered जो चलचित्र "ड्राइभिङ्ग पाठ," मा सुनिन्थ्यो।
प्रसिद्ध फिलिम "द लेक हाउस", 2006 मा यसको लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ जसमा एक संरचना Nika Dreyka समय मलाई भन्नुभयो छ सुनिन्थ्यो।
La Belle Personne को तस्वीर, 2008 मा प्रकाश देखे निक को निम्न गीतहरू समावेश: भयो छ निलो, उत्तरी आकाश, फ्लाई, दिन तरिका।
फ्लाई संरचना 2001 मा भाडामा मा जारी फिल्म "द रोयल Tenenbaums", मा सम्झना थियो।
2009 मा फिल्म "प्रेत दुखाइ" मा ज्ञात हुने बिहान, गीतहरू।
लोकप्रिय गीत एक पहिलो एक उच्च मूल्याङ्कन, "बगैचा राज्य" (2004) र "सात पाउन्ड" (2008) सँग दुई चलचित्रहरू प्ले थियो यी कुराहरू।
झोला मानिस, 2014 मा भाडामा मा जारी भएको थियो जुन, गीत निक दिन गरिन्छ समावेश गर्यो।
व्यापार स्क्राच देखि - महिमा वा शो को सेतो बादल हुर्काउन
चिकित्सकीय संगीत र मानव शरीर यसको प्रभाव
सोच्दै - के बाली सपना?
फस्फोरिक एसिड: हानि वा लाभ
भ्यागुतो टमाटर: असामान्य amphibian को विवरण
"Tager"। वाहन को प्राविधिक विशेषताहरु